बुटवलमा रहेको एक टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन सँगै हालै एनटिभीको झन्कार लाइभ कार्यक्रम प्रस्तोता बाग्लुङ्ग जिल्लामा जन्मीएर कार्यक्रम स्टेज उद्घोषण सँगै साँगीतिक क्षेत्रमा रहेर पछिल्लो समयमा चर्चा बटुल्दै गरेकी गायिका शितल शर्मा सँग अनिल खत्रीले गर्नु भएका सांगितिक क्षेत्रका तिता मिठा कुराकानी । शितल जी यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद ! के मा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोली
२०७५ असार २६, मंगलवार १४:१८
करिश्माको तिज अमेरिकासम्म ! (भिडियो)
नायिका करिश्मा मानन्धर अभिनित तिज गीत ‘तिजको लहर अमेरिकासम्म’ सार्वजनिक भएको छ । गायिका पारु रंजितको स्वर रहेको उक्त तिज गीतमा शब्द/संगीत बाबुल गिरीको रहेको छ । श्रीधर पौडेलको छायाङ्कन रहेको उक्त भिडियोमा पवित्रा आचार्यको निर्देशन तथा कोरियोग्राफी रहेको छ भने सम्पादन बिष्णु शर्माले गरेका हुन् । भिडियोलाई बिरेन्द्र रंजितले निर्माण गरेका हुन् । हिन्दु
२०७५ असार २५, सोमबार १८:००
प्रेम विवशको मायाको वासना हरर (तिज गीत भिडियो सहित हेर्नुस्)
https://youtu.be/e2YOL1eya0M काठमाडौं । गायक प्रेम विवश घर्तीको तिज गीत मायाको वासना बजारमा आएको छ । गायक घर्तीका देशझक्ती र लोकदोहोरी गीतहरु सँगै थुप्रै तिजका गीतहरु ले पनी चर्चा बटुल्दै आएका छन् । करिव तिन दर्जन बढी गीत गाएका घर्तीले विगत २०७१ साल देखी निरन्तर हरेक वर्ष तिजका गीतहरु दर्शक श्रोतामाझ पस्कदै आएका छन् । हरितालिका
२०७५ असार २४, आईतवार १०:०१
एसपि चन्द्र कुबेर खापुङको भ्रममा परे कि भुलमा परे गित सार्वजनिक
बजारमा तीजको गित आइरहेको समयमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपि) चन्द्रकुबेर खापुङ शब्दमा रहेको भ्रममा परे की भुलमा परे बोलको गित सार्बजनिक भएको छ । उनको शब्दमा तयार भएको यस गीतमा आलोकश्रीको संगीत र मल्लिका कार्कीको स्वर रहेको छ । सानै देखि साहित्य र संगितमा पनि रूची राख्ने खापुङका अन्य गीत पनि रेकडेड छन् ।
२०७५ असार १९, मंगलवार २०:३३
सांसद कोमल वली र बहिनी प्रज्ञाको तिजको नयाँ कोसेलि ‘आउ दिदी बहिनी हो’(भिडियोसहीत)
वलि सिष्टर्सको म त नाँच्दिन क्यारे’ यस वर्षको नयाँ तिज गित सार्वजनिक संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएपछि कोमल वली र उनकी बहिनी प्रज्ञा वली ‘वली सिस्टर्स’ को संयुक्त तीज गीत ‘आउ दीदी बहिनी हो गरौं रमाईलो’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा संगीतकार तथा गीतकार एकनारायण भण्डारी रहेका छन् भने ठेट नेपाली शब्द तथा
२०७५ असार १९, मंगलवार १८:२२
खेतमा निरुताले केके देखाईन् ? ( तस्विरहरु)
असार १५ । धान दिवशमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर मनाईदै छ । कलाकारहरु पनि धान दिवशको अवसरमा खेतमा पसेका छन् । यस्तै अहिलेकी चर्चित मोडल निरुता क्षेत्री पनि धान दिवशमा धान रोप्न खेत पसेकी छन् । उनी भक्तपुरमा एक किसानको खेतमा धान रोप्न गएकी हुन् । Share
२०७५ असार १५, शुक्रबार १९:०४
गायिकाद्वय कोमल ओली र राधिका हमालको घम्साघम्सी
२०७५ असार ११, सोमबार १०:५४
काठमाडौं । साउन ४ गते रिलिजको तयारीमा रहेको दीपक ओली निर्देशित फिल्म ‘पण्डित बाजेको लौरी’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । दाङ, बाँके, सल्यानसहितका जिल्लामा बसोबास गर्ने बादी समुदायको कथामा निर्माण गरिएको फिल्मका लेखक महेश दवाडी हुन् । कमेडी, प्रेम, बदला, द्वन्द्व मिसिएको ट्रेलरमा ‘‘बादी’ को कथाका झलक समेत देखाइएको छ । कलाकार विजय बराल ‘बादी’
२०७५ असार ११, सोमबार ०८:४८
मिस्टर जनजाति नेपाल २०१८ को उपाधी दाङका सुमनलाई
दाङ, जेठ २९ । यस वर्षको मिष्टर जनजाति नेपाल २०१८ को उपाधि दाङ सुमन श्रेष्ठ र भैरहवाकी वर्षा आले मगरले जितेका छन् । सुमनले उपाधीसँगै बेष्ट फोटोजेनिक अवार्ड पनि जित्न सफल भएका छन् । उपाधिसँगै सुमन र वर्षा शक्ति इन्टेल एजुकेशन कन्सल्टेन्सिका ब्राण्ड एम्वेसडर घोषित भएका छन् । प्रतियोगितामा फष्ट रनर अप चितवनका अमन तामाङ्ग
२०७५ जेष्ठ २९, मंगलवार २१:०९
दाङका लोक गायक विक्रम थापाको नयाँ गित उपहार ‘मुड चल्यो’(भिडियो)
एकैचोटी एक लाख बढिले युटुवमा गित हेरे काठमाडौँ । लोकदोहोरी गायिका धनकुमारी थापा (सरु), गायिका पूर्णकला बिसी तथा दाङ निवासि लोकदोहोरी गायक बिक्रम थापाको ‘आज मुड चल्या छ दोहोरी गीत गाउँ’ बोलको नयाँ दोहोरी गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । भिडियो सार्वजनिक भएपछि एकैचोटि एक लाख बढिले युटुवमा हेरेका छन् । दशकौँदेखि लोक गायन
२०७५ जेष्ठ २७, आईतवार १५:४५
सर्वोउत्कृष्ट राष्ट्रिय गीत अवार्ड प्रेम विवश घर्तीलाई
काभ्रे : बनेपामा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय सुन्दरादेवी म्यूजिक अवार्ड २०७५ गायक प्रेम विवश घर्तीले राष्ट्रिय गीत बाट सर्वोउत्कृष्ट भएका छन् । दोहोरी र तिजका गीत गरी करिब तीन दर्जनको हाराहारीमा दर्शका श्रोतामाझ आफ्ना साँगीतिक कोसेली पस्किएर चर्चा कमाउन सफल भएका गायक तथा सँगीतकार प्रेम विवश घर्तीेले जागरण दिने देशभक्तिको गीत ‘हाम्रो नेपाल राम्रो नेपाल’ बाट सर्वोउत्कृष्ट
२०७५ जेष्ठ २७, आईतवार १४:४८
कलाकारितामा जम्दै ‘कला’
लोक गीत गाउने कार्यक्रम भनेपछि विद्यालय र जिल्लामा आयोजना हुने कार्यक्रममा मिन माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाको मुखमा कला लम्सालको नाम आउथ्यो । निम्न माध्यमिक तहदेखी नै जिल्लाका विभिन्न लोकगीत कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएकी कला लम्साल पछिल्लो समय आफूलाई राष्ट्रिय कलाकारको रुपमा स्थापित गराउन सफल भएकी छिन् । ‘नाकै हेर्दा थाँ हुने,’ बोलको गीतबाट चर्चामा आएकी
२०७५ जेष्ठ २६, शनिबार १८:१४
कृतिले दाङका गायक मेक्समलाई जोगी बनाएपछि‘ (भिडियो)
घोराही । गायक तथा मोडल दाङका मेक्सम खाती क्षेत्रीको नयाँ गीत जोगी बनायौ सार्वजनिक भएको छ । युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको गीतमा गायक नरेश खाती क्षेत्री, कुमार पौडेल र गायिका प्रिति आलेको स्वर रहेको छ । कुमार पौडेलको शब्दरचनामा रहेको गीतको लय तथा संगीत पक्ष भने गायक नरेशकै रहेको छ । गीत सँगसँगै भिडियो पनि एकदमै
२०७५ जेष्ठ २६, शनिबार १६:४१
प्रेम शर्माको नयाँ गित‘ लाको माया छोडेर का जाम्ला’ बजारमा(भिडियोसहीत)
घोराही, २५ जेठ । दाङका चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक प्रेम शर्माले लाको माया छोडेर का जाम्ला नामक नयाँ गीती संग्रह भर्खरै बजारमा ल्याएका छन । गायक प्रेम शर्मा र डोल्मा लामिछाने मगरको स्वरमा रहेको नयाँ गितिसंग्रह भर्खरै युटुब मार्फत सार्वजनीक भएको छ । विगत एक दशक यतादेखि संगितक्षेत्रमा लागेका दङ्गाली लोक तथा दोहोरी गायक
२०७५ जेष्ठ २५, शुक्रबार १७:३२
आश्माको मायामा डुब्न थाले आकाश
आर.बी मुभिजको प्रस्तुतिमा तयार भएको चलचित्र ‘ड्रिम गल’को पहिलो गीत रिलिज गरिएको छ । काठमाण्डौमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चलचित्रमा समावेश ‘तिम्रो मायामा हराउन’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । ऋषिराज आचार्यको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्र असोज १९ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । सार्वजनिक गीतमा अन्जु पन्त र सुरेश लामाको स्वर छ भने
२०७५ जेष्ठ २४, बिहीबार २०:०६
मिस एसइइको ताज अञ्जना कुँवरले पहीरीइन्
दाङमा शिक्षा र कला क्षेत्रलाई जोडेर पहिलोपटक आयोजना गरिएको मिस एसइइ २०७५ को ताज अञ्जना कुँवरले पहिरिनुभएको छ । यो बर्ष एसइइ परीक्षा दिएर बसेका किशोरीबीच गराइएको विभिन्न चरणको प्रतियोगितामध्ये मंगलवार गराइएको फाइलनबाट उहाँ अन्तिम पाँच जना प्रतिष्पर्धीबीचबाट बिजयी हुनुभएको हो । त्यस्तै फस्ट रनरअप (दोस्रो स्थान) सरु परियार र सेडकेण्ड रनरअप (तेस्रो स्थान) अञ्जली
२०७५ जेष्ठ १५, मंगलवार २१:४१
संघर्षले बनेकी लोकगायिका
कृष्ण आचार्य काठमाडाैं, १५ जेठ | गाउँघरमा हुने मेला, जात्रा, बिहेमा होस् या रोधी बस्दा । उनको कानमा लोकभाका गुन्जिन्थ्यो । उनी पनि स्वरमा स्वर र तालमा ताल मिलाउँथिन् । यसैवेलादेखि नै हो भूमिका गिरीको लोकभाकाप्रति मोह बसेको । कक्षा ५ मा पढ्दा उनी पहिलोपटक प्रतिस्पर्धामा उत्रिइन् । उनको स्वर यति मीठो थियो कि विद्यालयका
२०७५ जेष्ठ १५, मंगलवार १८:५१
‘नव कुसुम’ लिएर आइन् कुसुम
काठमाडौं, १४ जेठ । कोपनहेगन निवासी गायिका कुसुम दाहालको एल्बम् सार्वजनिक भएको छ । डेनमार्क बस्दै आएकी कुसुम दाहालले आफूले गाएका पाँचवटा गीतहरुलाई समावेश गरी ‘नवकुसुम’ नाम दिएर एल्बम् सार्वजनिक गरेकी हुन् । पछिल्लो समयका चर्चित संगीतकार भूपु पाण्डेद्वारा संगीतवद्ध सम्पूर्ण गीतहरुलाई पाँच भिन्न भिन्न गीतकारहरुले रचना गरेका हुन् । एल्बम्मा डा. कृष्णहरि बराल, भविन्द्र
२०७५ जेष्ठ १४, सोमबार १८:३५
कलाकारिता र पत्रकारितामा जम्दै आएका खड्ग शर्मा
आर.के.शीतल सानो छदा गाँउमा कथा, लाखबत्ति पूजामा टुप्लुक्कै पुग्थे । त्यहा पुगेर मादल बजाउनेदेखी दोहोरी गीत गाउनमा खप्पीस् । दोहोरी पनि रातभर गाएको सम्झना छ । १४÷१५ वर्षको हुँदादेखी नै उनी नाचगानमा अगाडी थिए । गाँउमा उनको खोजी हुन्थ्योः तीज, पूजाआजामा । गाँउघरमा सबैमाझ गीत गाउने मादल बजाउने गरेपनि विद्यालयमा भने उनले कहिले पनि गीत
२०७५ जेष्ठ १४, सोमबार ११:१५
‘गोरखपुरको सलाइ’पछि गायिका भूमिकाको अर्को धमाकेदार गीत (भिडियो)
काठमाडौं । गायिका भूमिका गिरीले लोक दोहोरी गीत ‘मायाकै पिरलो’ ल्याएकी छिन् । केही समय अगाडि रिलिज गरेको गीतले राम्रो रेस्पोन्स पाएको छ । गीतमा भूमिकालाई गायक भागिरथ चलाउनेले स्वरमा साथ दिएका छन् । ‘गीत राम्रो बनेको छ’, भूमिकाले भनिन्, ‘सबैले राम्रो भन्नुभएको छ । मलाई पनि गीत राम्रो लागेको छ ।’ गीत निर्माण गर्ने
२०७५ जेष्ठ १०, बिहीबार १४:५८
‘सोझो थारु’ सिरियल प्रशारण
दाङ,८ जेठ । ब्राहमण समुदायका मानिसहरुले थारु समुदायका मानिसहरुलाई गर्ने व्यवहारलाई समेटेर सोझो थारु वेव सिरियलको निर्माण गरिएको । सिरियललाई यहि जेठको पहिलो सोमवारदेखि प्रशारण सुरु गरिएको छ । एओन मुभि मेर्कस प्रा.लि.को व्यानरमा निर्माण गरिएको सिरियलमा केही बर्ष पहिलेसम्म ब्राह्मण समुदायका मानिसहरुद्धारा थारु समुदायका मानिसहरुलाई गरिने तल्लो स्तरको व्यवहार, मायाप्रेम, श्रीमान–श्रीमति विचमा विवाद हुदा
२०७५ जेष्ठ ८, मंगलवार २०:३७
वेाल माया भन्दै भक्कानिएर अचेत अवस्थामा ढलिन शान्ती श्री परियार,भिडियो सहित
काठमाण्डौ।धन ल्याउने सपना वाेकेर प्रदेश पसेकाे श्रीमान काठकाे वाकसमा फर्किदा कुन नारीकाे मनमा खुसि छाउन सक्छ र यस्तै पिडाले सताउने गरेकाे एक मनै रूवाउने दर्दनाक गितमा चर्चित गायिका शान्ती श्री परियारले भक्कानिदै भनेकी छिन ।धन ल्याउछु भन्दै अाकशमा उडेर गएका थियाै तर वाकसमा फर्किएउ संगै जाम स्वर्ग भनेकाे भए वरू मै जाने थिईन र भन्दै
२०७५ जेष्ठ ५, शनिबार १९:१४
विवाहका लागि केटा पाइनः गायिका आस्था राउत
काठमाडौं । गायिका आस्था राउतले खोजे जस्तो केटा नपाएका कारण विवाह नगरेको बताएकी छिन् । एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममामा अन्तर्वार्ताका क्रममा राउतले सज्जन विज्नेशम्यान युवकलाई आफूलाई मन पर्ने बताएकी छिन् ‘मन मिल्यो भने जो केटासँग पनि विवाह गर्छु’, उनले भनिन्, ‘विभिन्न माध्यमबाट विवाहको प्रस्ताव आइरहेको छ ।’ संगीत बुझेको व्यक्तिलाई श्रीमान् बनाउने योजना रहेको उनले बताइन्
२०७५ बैशाख २७, बिहीबार ०९:४५
मिसेस नेपालको प्रतिष्पर्धाम प्रदेश ५ वाट दङ्गालि चेलि कल्पना श्रेष्ठ, भोट गर्न सबैलाई आग्रह
काठमान्डौ, बैशाख २४ । विवाहीत महीलाहरुका लागि सञ्चालन गरीएको मिसेस नेपालको प्रतिष्पर्धामा दङ्गालि चेलि कल्पना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । देशभरीवाट करीव ३१ जना सहभागि रहेको मिसेस नेपाल प्रतियोगिताको अहिले तालिम चलिरहेको छ । श्रेष्ठ प्रदेश नम्बर ५ को दाङवाट एक्ली प्रतिष्पर्धि हुनुहुन्छ । ब्युटिसियन क्षेत्रमा लामो अनुभव संगाल्नु भएकि श्रेष्ठले मिसेस नेपालमा सहभागि भएर दाङको नाम
२०७५ बैशाख २४, सोमबार १८:५७
“गायक बन्ने सपना थियो, समयले श्रजक बनायो”: नरेश खाती क्षेत्री
सुदिप गौतम / बुटवल नेपाली लोक तथा दोहोरी गितको क्षेत्रमा एक अब्बल कलाकारको रुपमा रहेका कलाकार हुन ” नरेश खाती क्षेत्री“।उनको सब्द रचनाले अनि संगीतले सबैको मन छुने गर्दछ। गुल्मी को पौदी अ्म्राई बाट उनको परिवार बसाई सरेर दाङमा आए। उनको बाल्यकाल गुल्मी मै बित्यो। त्यसपछि दाङ आए र दाङ पछि बहुचर्चित गित ” मेरि
२०७५ बैशाख २४, सोमबार १६:२१
भूपू पाण्डेको सिजनल रोमान्टिक गीत छाता सार्वजनिक
देउखुरी, २४ बैशाख । शिवु खनाल दंगाली युवा गायक भूपू पाण्डेको राइन रोमान्टिक गीत छाता बोकी लैजाउ है पानी पर्ला बाटैमा सार्बजनिक भएको छ । राप्ती याउँपालिका वडा नम्बर ५ सिसहनियाँ निवासी पाण्डे मिठो स्वरका धनि, आफ्नो अलगै पहिचान बनाउन सफल गायक भूपू पाण्डेको स्वर, संगीत तथा एरेन्ज रहेको छाता गीतमा राम अविरल बिस्टको शब्द
२०७५ बैशाख २४, सोमबार १६:०१
दाङ,वैशाख २४ । संगितको पहिलो परिक्षा नजिकीदै थियो । प्रतिष्पर्धाले खारिएको यो क्षेत्रमा नतिजा कस्तो आउला ? मनमा अनेकन प्रश्नहरु उब्जिईरहेका थिए । परिक्षामा होमिनु त थियो नै । सिर्जना खत्री ‘हाउडे मायाँ’ को ‘बर्णन’ सहित परिक्षामा सामेल भईन् । गायन सोचे भन्दा राम्रो बन्यो । अब नतिजाको चिन्ता थियो । गायकीमा राम्रो मेहनत ,
२०७५ बैशाख २४, सोमबार १५:१८
नम्रताको शिकारी आँखा
गायक केशव पौडेलको नयाँ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। रामकुमार आचार्यको शब्द तथा केशवको संगीत रहेको शिकारी आँखा बोलको गीतको भिडियोमा नम्रता सापकोटा र काजिस श्रेष्ठ फिचर्ड छन्। एल्वम भोगार्इ भिन्न भिन्नमा समावेश यस गीतमा अजय रेग्मीको छायाँकन काजिस श्रेष्ठको निर्देशन र दिपक विष्टको सम्पादन रहेको छ।
२०७५ बैशाख २४, सोमबार ०९:३५
जुनिजुनि मेरै’मा संचिताको ववाल यस्तो अभिनय (भिडियो हेर्नुहोस्)
काठमाडौँ । पुस्कल शर्मा, खेम कार्कि र जुना शिरीष मगरको सुमधुर स्वरमा सजिएको लोकदोहोरी गीत जुनिजुनि मेरै’ बजारमा आएको छ । गितमा मुख्य अभिनय मोडल सचिंता शाहीको रहेको छ । उक्त गितमा शाहीको अभिनय चर्चामा रहेको छ ।
२०७५ बैशाख २४, सोमबार ०९:११
जेठ ३ देखि मिस एसइइ दाङ हुने
विजेताले १२ कक्षासम्म अध्ययनको छात्रवृत्ति पाउने दाङ, ९ बैसाख । दाङमा पहिलोपटक मिस एसइइ हुने भएको छ । उत्सर्ग फिल्मस् नेपाल र रोयल ब्यूटी एकेडमीको संयुक्त आयोजनामा आगामी जेठ ३ गतेदेखि यो कार्यक्रम शुरु हुने भएको छ । दाङबाट एस इइ दिएका युवतीहरुले यस प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछन् । प्रतियोगिताको विजेतालाई गोरखा स्कूलले १२ कक्षासम्म
२०७५ बैशाख ९, आईतवार २२:०६